သချိုင်းကုန်းက အသားနဲ့ စည်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့..စည်တစ်ခါထုတိုင်း.. မသာတွေများ တန်းစီမလားဗျာ…. – Lawkathuta
သတင်း, သတင်းဆောင်းပါး March 31, 2018
သချိုင်းကုန်းက အသားနဲ့ စည်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့…
စည်တစ်ခါထု တိုင်း.. မသာတွေများ တန်းစီမလားဗျာ….
မြန်​မာနိူင်​ငံရဲ့ အကြီးဆုံးဖြစ်​လာမယ့်​ စည်​​တော်​ ကို မ​နေ့က Page တစ်​ခုမှာ ဖတ်​လိုက်​ရ​တော့….
အမှုမဲ့အမှတ်​မဲ့ ​နေလိုက်​တာ ယ​နေ့ ရတနာပုံသတင်းစာ မှာပါတဲ့ သတင်းပုံကို ​တွေ့လိုက်​ရ​တော့ အံ့အားသင့်​သွားမိတယ်​ ….။
စည်​​တော်​ ဆိုတာ သာသနာ​တော်​ဆိုင်​ရာ​တွေ၊ မင်းခမ်းမင်းနား​တွေ စတဲ့ ကြီးကျယ်​တဲ့ မင်္ဂလာပြု မှု​တွေမှာ သုံးတဲ့ အ​ဆောင်​အ​ယောင်​တစ်​ခုပါ ….
​စည်​​တော်​လုပ်​ပုံ ဣဌမင်္ဂလာ​တွေကို အသာထားဦး​တော့ ….
အခု စည်​​တော်​လုပ်​တဲ့ ကုက္ကိုသားကြီးဟာ သင်္ချိုင်းသုဿ န်​ပျက်​ တနည်း​ပြောရင်​ ဖုန်းဆိုး​မြေ​ပေါ်က ရလာတဲ့ သစ်​သား နဲ့ မြန်​မာနိူင်​ငံမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်​လာမည့်​ စည်​​တော်​ကို ထွင်းမှာဆို​တော့….
မြန်​မာပြည်​ကို ရည်​ရွယ်​ချက်​ရှိရှိ နာမ်​နှိမ်​သလား​တောင်​ထင်​ရတယ်​ ….
စည်​​တော်​မှာ မြတ်​စွာဘုရားရဲ့ ​ခြေ​တော်​ရာကို နတ်​​လေးပါးက ပူ​ဇော်​ကန်​​တော့​နေတဲ့ ပုံပါ ထုလုပ်​ဦးမယ်​ဆိုပဲ ….
ဣဋ္ဌနဲ့ အနိဋ္ဌ လုံးဝ မတွဲ​ကောင်းပါဘူး ….
ဖုန်းဆိုး​မြေ​ပေါ်က ရလာတဲ့ သစ်​သားကြီးနဲ့ ​ခေါင်းတလားလုပ်​လိုက်​ရင်​ကမှ ​ထို​ခေါင်းတလားနဲ့ ချမယ့်​မသာ စည်​ကားဦးမယ်​….
ဘာလို့လဲဆိုရင်​ အနိဋ္ဌ + အနိဋ္ဌ ​= ဣဋ္ဌ ဖြစ်​သွားပြီး မသာပန်းပွင့်​တယ်​​ပေါ့ ….။
အခုဟာက အနိဋ္ဌ + ဣဋ္ဌ = အနိဋ္ဌ ဖြစ်​​နေ​လေ​တော့ မြန်​မာနိူင်​ငံတွင်​ အကြီးဆုံးဖြစ်​လာမည့်​ စည်​​တော်​တစ်​ခါရွှန်းတိုင်း မြန်​မာနိူင်​ငံတွင်းက သင်္ချိုင်း​တံခါး​တွေ ပွင့်​ပွင့်​သွားသလိုများ ဖြစ်​​လေမလား၊ နတ်​မိစ္ဆာ​တွေ ​ပျော်​ကြမလား လို့​တောင်​ ယူဆသုံးသပ်​မိပါ​တော့သည်​။
မလုပ်​သင့်​တာလုပ်​ရင်​ မဖြစ်​သင့်​တာ ဖြစ်​တယ်​ ဆိုတာ ပုံ​သေနည်းစစ်​စစ်​ပါ။
​မေတ္တာ​ရှေးရှူ့  ​လေးစားမှုဖြင့်​…..
crd; mya mya khaing
သခြိုငျးကုနျးက အသားနဲ့ စညျတျောလုပျတယျဆိုတော့…
စညျတဈခါထု တိုငျး.. မသာတှမြေား တနျးစီမလားဗြာ….
ငယျငယျကကွားဖူးတာတော့ ခေါငျးတလါးကိုတောငျ မခေါကျရဘူးကွားတာပဲ…။
မွနျ​မာနိူငျ​ငံရဲ့ အကွီးဆုံးဖွဈ​လာမယျ့​ စညျ​​တျော​ ကို မ​နကေ့ Page တဈ​ခုမှာ ဖတျ​လိုကျ​ရ​တော့….
အမှုမဲ့အမှတျ​မဲ့ ​နလေိုကျ​တာ ယ​နေ့ ရတနာပုံသတငျးစာ မှာပါတဲ့ သတငျးပုံကို ​တှလေို့ကျ​ရ​တော့ အံ့အားသငျ့​သှားမိတယျ​ ….။
စညျ​​တျော​ ဆိုတာ သာသနာ​တျော​ဆိုငျ​ရာ​တှေ၊ မငျးခမျးမငျးနား​တှေ စတဲ့ ကွီးကယျြ​တဲ့ မင်ျဂလာပွု မှု​တှမှော သုံးတဲ့ အ​ဆောငျ​အ​ယောငျ​တဈ​ခုပါ ….
​စညျ​​တျော​လုပျ​ပုံ ဣဌမင်ျဂလာ​တှကေို အသာထားဦး​တော့ ….
အခု စညျ​​တျော​လုပျ​တဲ့ ကုက်ကိုသားကွီးဟာ သခငြ်္ိုငျးသုဿ နျ​ပကျြ​ တနညျး​ပွောရငျ​ ဖုနျးဆိုး​မွေ​ပျေါက ရလာတဲ့ သဈ​သား နဲ့ မွနျ​မာနိူငျ​ငံမှာ အကွီးဆုံးဖွဈ​လာမညျ့​ စညျ​​တျော​ကို ထှငျးမှာဆို​တော့….
မွနျ​မာပွညျ​ကို ရညျ​ရှယျ​ခကျြ​ရှိရှိ နာမျ​နှိမျ​သလား​တောငျ​ထငျ​ရတယျ​ ….
စညျ​​တျော​မှာ မွတျ​စှာဘုရားရဲ့ ​ခွေ​တျော​ရာကို နတျ​​လေးပါးက ပူ​ဇျော​ကနျ​​တော့​နတေဲ့ ပုံပါ ထုလုပျ​ဦးမယျ​ဆိုပဲ ….
ဣဋ်ဌနဲ့ အနိဋ်ဌ လုံးဝ မတှဲ​ကောငျးပါဘူး ….
ဖုနျးဆိုး​မွေ​ပျေါက ရလာတဲ့ သဈ​သားကွီးနဲ့ ​ခေါငျးတလားလုပျ​လိုကျ​ရငျ​ကမှ ​ထို​ခေါငျးတလားနဲ့ ခမြယျ့​မသာ စညျ​ကားဦးမယျ​….
ဘာလို့လဲဆိုရငျ​ အနိဋ်ဌ + အနိဋ်ဌ ​= ဣဋ်ဌ ဖွဈ​သှားပွီး မသာပနျးပှငျ့​တယျ​​ပေါ့ ….။
အခုဟာက အနိဋ်ဌ + ဣဋ်ဌ = အနိဋ်ဌ ဖွဈ​​နေ​လေ​တော့ မွနျ​မာနိူငျ​ငံတှငျ​ အကွီးဆုံးဖွဈ​လာမညျ့​ စညျ​​တျော​တဈ​ခါရှနျးတိုငျး မွနျ​မာနိူငျ​ငံတှငျးက သခငြ်္ိုငျး​တံခါး​တှေ ပှငျ့​ပှငျ့​သှားသလိုမြား ဖွဈ​​လမေလား၊ နတျ​မိစ်ဆာ​တှေ ​ပြျော​ကွမလား လို့​တောငျ​ ယူဆသုံးသပျ​မိပါ​တော့သညျ​။
မလုပျ​သငျ့​တာလုပျ​ရငျ​ မဖွဈ​သငျ့​တာ ဖွဈ​တယျ​ ဆိုတာ ပုံ​သနေညျးစဈ​စဈ​ပါ။
​မတ်ေတာ​ရှေးရှူ့​လေးစားမှုဖွငျ့​…..
ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဖူးများ သတိထား ပူဇော်ကြသူများ ဂယာလေဆိပ် ဆိုက်ရောက်ဌာနတွင် တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် ရွှေပုတီးကုံးကို ပွတ်ကာပွတ်ကာဝင်လာသော ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကို လဝကတာဝန်ကျအရာရှိ တွေ့မြင်သောအခါ– – ဘန္တေကြီး ဒါရွှေပုတီး မဟုတ်လား၊ – အင်း ဟုတ်တယ်ကွယ့်၊ – တန်းဖိုးကြီးလွန်းတဲ့အတွက် သိမ်းဆည်းရပါမယ်၊ – ဘာဖြစ်လို့တုန်း ဘုန်းကြီးအရင်လာတိုင်း ယူလာနေကြပဲ၊ …
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်ရှိ မနောဖြူမီးသဂြိုလ်စက်နှင့်သရောင်းချောင်းသုသာန်တွင် ယနေ့မှစ၍ ၅ ရက်တိုင်တိုင်အကျွတ်အလွတ်ပွဲနှင့်သုသာန်အထူးတရားပွဲပြုလုပ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တရားနာအမျှဝေကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ “ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီသုသာန်မှာ ခန္ဓာစွဲပြီး မကျွတ်မလွတ်တဲ့ ဘုရားဟောဆိုပြိတ္တာဘုံပေါ့ သူတို့သာဓုခေါ်နိုင်အောင်လို့မနောဖြူပရဟိတဆရာတော် ဦးစန္နာသီရိရဲ့လမ်းညွန်မူနဲ့ကျင်းပတာပါ”ဟု ကျင်းပရေးအဖွဲ့ပုသိမ်မြို့မေတ္တာစမ်းရေ လူမူကူညီရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးသိန်းတန်ကပြောသည်။ အကျွတ်အလွတ်ပွဲအတွက် ပုသိမ်တမြို့လုံးလိုက်လံဖိတ်ကြားခဲ့ပြီ ပရလောကသားများအတွက် တရားယူရန် နေရာသတ်မှတ်ထားခြင်း သချိုင်းအုတ်ဂူများတွင် …
စေတီတော်တွင် ထူးဆန်းစွာ မျက်နှာတော်ပေါ်နေခြင်း
စေတီတော်တွင် ထူးဆန်းစွာ မျက်နှာတော်ပေါ်နေခြင်း ဆံတော်ရှင် မွန်ပြည်နယ် ဇိန စေတီတော် တွင် ထူးထူး ဆန်းဆန်း မျက်နှာတော် ပေါ်နေတဲ့ Video လေး တွေလို့ပါ ။ အများ ဗဟုသုတ ရစေဖို့အတွက် ဘုရား သမိုင်း ကြောင်းနဲ့ တွဲတင်ပေး လိုက်တာ ပါ …
AA ကို ရဟတ်ယာဉ်သုံး တိုက်ခိုက်မှု သမ္မတရုံး ခွင့်ပြုချက် မလိုဟု ဆို
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ် အတွင်း ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA)နှင့် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော တိုက်ပွဲ များတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်က စစ်ရဟတ်ယာဉ်သုံး တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးသို့ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရန် မလိုဘဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်တွင် …
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ မိကျောင်းမှော်ဆရာမ အချောလေး
Gabby Scampone အမည်ရ အသက် (၂၂)နှစ်အရွယ် နယူးယောက်မြို့သူလေးဟာ သူမရဲ့ မြို့ပြလူနေမှုဘဝကို စွန့်ခွာပြီး၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က Fort Lauderdale ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ မိကျောင်းတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သဖွယ် ချစ်ခင်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး၊ မိကျောင်း Alligator wrestler အဖြစ်လည်း အသက်မွေးဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့ပါတယ်။ …